Google (XML) Sitemaps Generator for WordPress | WordPress.org မြန်မာ | Burmese
Support » ပလပ်အင်များ » Google (XML) Sitemaps Generator for WordPress
9 years,5months ကတည်းက
ကျွန်ေတာ်တို့ self hosted WordPress blog ေတွဟာ blogspot.com, wordpress.com တို့ရဲ့အသင့်သံုး blog ေတွထက် Professional ဆန်မှု၊ စိတ်ြကိုက် customize လုပ်နိုင်မှု စတဲ့ အဖက်ဖက် အားသာချက်ေတွများေပမယ့် အေရးြကီးတဲ့ လိုအပ်ချက်တစ်ခု ရှိေနပါတယ်။ အဲဒါကေတာ့ SEO လို့အတိုေကာက်ေခါ်ြကတဲ့ search engine optimization အပိုင်းပါ။ ဘီလူးြကီးေတွဆီက အသင့်သံုး blog ေတွဟာ SEO အပိုင်းကို ေသချာြပုထားေပးြပီး ြဖစ်တာေြကာင့် တင်ြပထားတဲ့ အေြကာင်းအရာေတွကို search engine ေတွရဲ့ အေပါ်ပိုင်းေနရာေတွမှာ ရှာေဖွေတွ့နိုင်ေပမယ့် ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ self hosted WordPress blog ေတွမှာေတာ့ ဒီလိုမျိုး လွယ်လွယ်နဲ့ ြဖစ်မလာပါဘူး။ အဲဒီြပသနာကို အတုိင်းအတာ တစ်ခုထိ ကူညီေြဖရှင်းေပးနိုင်တာကေတာ့ Google XML Sitemap Generator ဆိုတဲ့ plugin ပါပဲ။ ဒီ plugin က google, yahoo, msn စတဲ့ search engine ေတွကို ကျွန်ေတာ်တို့ရဲ့ blog ကို သိရှိေအာင်၊ blog မှာ ေရးသားတင်ြပထားတဲ့ အေြကာင်းအရာေတွကို search engines ေတွရဲ့ web crawlers ဆိုတဲ့ ပရိုဂရမ်ေလးေတွ ကတဆင့် ေကာက်ယူနိုင်ေအာင် ကူညီေပးမှာြဖစ်ပါတယ်။ plugin အသံုးြပုပံုကို ြကည့်ရေအာင်…
(၁) plugin ကို ဒီေနရာမှ download ချ hosting ကို upload တင်ြပီး ထံုးစံအတိုင်း dashboard / plugins မှာ Activate လုပ်ပါ။ ြပီးလှျင် dashboard / settings တွင် XML-Sitemap ကိုနှိပ်လိုက်လှျင် Status, Basic Options, Additional pages စသည်များကို ေတွ့ရပါလိမ့်မယ်။
(၂) ပထမဆံုး Status ေအာက်က The sitemap wasn’t built yet. ဆိုတဲ့ေနရာမှာ sitemap ကို အရင်ြပုလုပ်ေပးရပါမယ်။ plugin မှ root directory ထဲတွင် sitemap.xml နဲ့ stiemap.xml.gz ဖိုင် ၂ ဖိုင်ကို ေအာ်တို တည်ေဆာက်သွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ sitemap ြပုလုပ်ြခင်း အဆင်မေြပေြကာင်း error တက်လာခဲ့ရင် wordpress install လုပ်ထားတဲ့ root directory ကို ftp သို့ file manager မှတဆင့် writeable ေြပာင်းေပးရပါမယ်။ sitemap file ြပုလုပ်ြခင်းြပီးစီးလှျင် Google, MSN, ASK.com စတဲ့ search engine ေတွကို notified လုပ်ေပးသွားမှာြဖစ်ပါတယ်။ Yahoo ကိုပါအလုပ်လုပ်ေစချင်ရင်ေတာ့ Yahoo ရဲ့ Application ID လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအေြကာင်းအေသးစိတ်ကို ေနာက်ပို့စ်များမှာ ထပ်ေရးပါမယ်။
(၃) plugin ရဲ့ Sitemap Content, Change frequencies, Priorities စတဲ့ေခါင်းစဉ်ေတွေအာက်က settings ေတွကိုလဲ မိမိနဲ့ သင့်ေလှျာ်သလို ေြပာင်းလဲေပးနိုင်ြပီး သူ့ default အတိုင်းအသံုးြပုလဲ မှားယွင်းစရာမရှိ အသံုးြပုနိုင်ပါတယ်။
့​့​့​http://mmwordpress.com​ မှ​ ​ကူး​ယူ​ေဖာ်​ြပ​ပါ​သည်​။​
The topic ‘Google (XML) Sitemaps Generator for WordPress’ is closed to new replies.
Last activity:9years,5months ကတည်းက